1. Ungayenza kanjani ubhontshisi waseFrance onephunga, okumnandi, inhlanganisela ephelele. Kuhle kakhulu ukuthi awukwazi ukuyeka ukudla
2. Isinkwa saseFrance, noma esaziwa nje ngokuthi isinkwa esigxotshwe ngeqanda, ngesitayela sikanokusho sasentshonalanga. Ongawakha ube uphudingi omnandi Okungahanjiswa ephathini Iphathi noma njengesidlwana Ukuyifaka njengesidlo sasekuseni esidliwe ubisi, itiye noma ikhofi, futhi kungenziwa futhi njengophudingi wokwamukelwa ntambama. Okungakutshela ukuthi ubhontshisi waseFrance kulula ukwenza, futhi uma uhlotshiswe ngezithelo ezintsha, uzongeza Inani lokudla okunempilo Ngokuphelele Futhi, lapho idliwa, isazizwa ivuselelwe futhi inamandla. I-Toast yaseFrance nayo kulula kakhulu ukuyenza. Noma ungalungile ekuphekeni Futhi akunzima ukulungiselela izithako Kungathengwa emakethe Isitolo somnyango Noma izitolo ezilula nazo Uma isilungile, ake silungiselele izinto zokusetshenziswa zeFrench Toast Berry emnandi. Inqubo yokulungiselela impahla eluhlaza ngale ndlela elandelayo
3. Izingcezu ezi-2 zesinkwa esijiyile
4. Amaqanda ama-2
5. 1 inkomishi ubisi olusha
6. Ingcosana kasawoti ukuthola ukunambitheka okuthe xaxa.
7. Izithelo zejikijolo ezinjenge-blueberries, ama-strawberry, noma yiluphi uhlobo lwesithelo.
8. Ubhanana o-1
9. Sthandwa, ngokusho kohlobo lwakho
10. Ibhotela elincane elingenawo usawoti
11. Lungisa izithako Bese uthele ubisi namaqanda amasha esitsheni. Faka usawoti omncane bese ushaya ukuhlanganisa, noma ungasebenzisa isixubi.
12. Faka isinkwa eqandeni elishayiwe nobisi nhlangothi zombili, ngemuva kwalokho ushise ipani emlilweni omncane bese ufaka ibhotela elincane, noma cishe u-10 amagremu. Siphendule ukuze wenze isinkwa sibe segolide nephunga ezinhlangothini zombili.Lapho isinkwa sesilungile, sibeke eceleni bese wenza esinye.
13. Bese ufaka ibhotela elincane epanini. Bese usika ubhanana ufake izingilazi bese ususa ibhotela Okungukuthi ngale ndlela kuzokwenza ubhanana ube mnandi ngokwengeziwe
14. Ngemuva kwalokho, beka zombili izingcezu zesinkwa epuletini. Ihlotshiswe ngamajikijolo Ukuze ube muhle, bese ubeka ubhanana ezungeze ipuleti bese uthela uju njengoba ufisa. Yilokho kuphela, ubhontshisi waseFrance uphelele.
15. Unjani Ngendlela yokwenza ubhontshisi waseFrance ongenziwa kalula, ngingasho ukuthi umnandi kakhulu. Futhi nemenyu yokwamukela izivakashi Ukunethezeka ngezinto zokusetshenziswa okulula ukuzithola Kuleli holide, ake senze ubhontshisi waseFrance ukuze umndeni noma abangane badle ndawonye, uzoba umlutha wobumnandi. Futhi imenyu yokudala efanelekile kuwo wonke umuntu